“အတွေးစလေးတွေ”: ချစ်သောမေမေ . . .
Posted by Han Kyi at 5:13:00 am
ပြန်လည်လာရောက် အားပေးသွားတယ်။ ဆက်လက်အားပေးနေမယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်
ဆေးကျောင်းသား၊ ဆရာဝန် အမေ နှင့် ယတြာ အကြောင်းဖတ်သွားပါတယ်၊
နန္ဒာလှိုင်အပေါ်မှာ အိပ်ဘူးတာပေါ့၊ ဟဟ
မိဘတွေကတော့ ဒီလိုပါပဲနော်.. ဆရာနဲ့ ဆရာ့ညီမက အပေါ်ပုံမှာတော့ ရုပ်ချင်းဆင်သားပဲ.. ဒုတိယပုံမှာတော့ သိပ်မပြောတတ်ဘူး.. ဆရာ့ပုံက သိပ်မမြင်ရဘူးလေ.. :)
ကိုပာန်ကြည်တို့ မိသားစု အကြောင်း လာဖတ်သွားတယ်။ ခိခိ... "ကြောင်လျှာသီး" လို့ နံရံမှာ ကိုပာန်ကြည့် မိခင်က ဖခင်ကို ရေးထားတာလေး ဖတ်ပြီး တော်တော် သဘောကျလို့ ပြုံးနေမိတယ်း)
ကိုပာန်ကြည်က ရည်မှန်းချက် ကြီးပြီး ပညာ ထူးချွန်တယ်နော်။
ကိုပာန်ကြည့် မိဘတွေ သားသမီးကို ပုံသွင်းပုံလေးက ရိုးသား ပွင့်လင်းပြီး ချစ်စရာ ကောင်းတယ်။ ယတြာ ချေနည်းတွေကို ဖတ်ပြီး တခွိခွိနဲ့ ရယ်နေမိတယ်း))
ဟဟ. ဆရာဟန်က ဒီလိုလား ဒါဆိုရင် နန္ဒာလှိုင်နဲ့ ဘာလိုလိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်..း)
ဆရာဟန့်အမေက သဘောကောင်းပြီး သားသမီးတွေကို ချစ်ခင်လွန်းတဲ့ပုံရတယ်..
ကံကောင်းလိုက်တာ မိသားစု ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေခဲ့ရတာ ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရတဲ့ အရာတွေဘဲပေါ့နော်။ ဒါနဲ့ ပေါင် ၁၀၀ တောင်မပြည့်တဲ့သူက ခုတော့ ၂ဆဖြစ်သွားပြီ မဟုတ်လား ဟိဟိ
ဗေဒင်က မှန်လိုက်တာ...အဲဒီဗေဒင်ကို မိန်းမရအောင် သွားအကူအညီတောင်းအုန်းမှ
ကြည်နူးစရာပဲ အဖေ အမေ အကြောင်းဖတ်ရတိုင်း ကြည်နူးပျော်ရွှင်မိတယ် သူတို့ချစ်ခြင်းတွေက သားသမီးတိုင်းကို အေးချမ်းစေတာကိုးး) ယတြာကတော့ စွမ်းပါ့နော့် ဟဟား
@အလွမ်းမြို့လေး - ကျေးဇူးပါ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ချင်ပါတယ်
@ကိုဆိုဆီ - အထင်မလွဲပါနဲ့ဗျာ မေမေက တခြားပုံပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
@sunny - အင်း...မမြင်ရဆို ဆရာ့အရောင်က သပိတ်ကို ကတ္တရာသုတ်ထားတဲ့ အရောင်ဖြစ်နေတာကိုး
@rose - အင်း ကိုယ်တို့ ပညာတွေတတ်လာတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တာ မိဘတွေကျေးဇူးပါလေ ထမင်းတစ်လုပ်စားတိုင်း မိဘကျေးဇုးကို အောက်မေ့ပါတယ်
@မချော - အဲလောကိေ်လဲ မပို့လိုက်ပါနဲ့လေ အခုမှ ပေါင်၁၆၀ ၀န်းကျင်လေးပဲ ရှိသေးတာပါ
@ကိုကျောက် - အဲဒီဗေဒင်ဆရာကို ကျွန်တော်မသိဘူးနော် မေမေပဲသိတာ
@မောင်မျိုး - မှန်လွန်းလို့ ဗေဒင်ဆရာကို လိုက်ရှာပြီး ကျည်ပွေ့နဲ့ ကန်တော့ချင်နေတာ
24 March 2011 at 12:04
သူများ မိသားစုလေးကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်မိသားစုလေးကို ပြန်သတိရသွားတယ်...။